Home Wararka Ciyaaraha Maanta Mesut Ozil oo sheegay Maalinta uu Macsalaamenayo Arsenal kana baxayo Albaabka Gunners
Weeraryahanka Arsenal Mesut Ozil ayaa lagu soo waramayaa inuu macsalaameyn doono asxaabtiisa maanta iyadoo xiddigii hore ee Jarmalka uu isku diyaarinayo inuu si xor ah kaga tago Emirates Stadium.
Ozil ayaa la rumeysan yahay inuu heshiis la gaaray Gunners si uu u dhammeeyo qandaraaskiisa bishaan, waxaana la filayaa inuu u safro Turkiga maalmaha soo socda si uu u dhameystiro ku biiristiisa Fenerbahce .
Sida laga soo xigtay The Sun , 32 jirkaan, oo aan u ciyaarin kooxda Mikel Arteta tan iyo bishii Maarso, ayaa macsalaameyn doona saaxiibadiisa garoonka tababarka kooxda ee London Colney Axadda maanta.
Ozil wuxuu saxiixay qandaraas £ 350,000-toddobaadkii ah garoonka Emirates Stadium 2018, warbixintu waxay sheegaysaa in weeraryahanku uu bixinayo ‘qayb’ mushaharkiisa si uu uga tago ‘heshiis wanaagsan’.
Ciyaaryahankii ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa Gunners kaga soo biiray Real Madrid sannadii 2013, waxaana uu ka tagi doonaa ka dib markii uu ka qeyb qaatay 44 gool iyo 77 caawin 254 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
DC United ayaa sidoo kale si xoogan loola xiriirinayay weeraryahanka, laakiin agaasimaha isboortiga Fenerbahce Emre Belozoglu ayaa dhawaan ka dhawaajiyay in u dhaqaaqista Turkiga ay ku dhowdahay in la dhameystiro.
Previous articleMusharaxa madaxweynaha Barcelona Joan Laporta oo ka hadlay Joogitaanka Messi ee Kooxda
Next articleCristiano Ronaldo oo caawa isku qori kara Taariikh Cusub Kulanka Inter Milan iyo Juventus